January 9, 2022 - Online Hartha
သားဦးစနေ မီးလိုမှဆေိုတာ ယုံတမျးစကားလား? တကယျလား?
သားဦးစနေမွေးရင်ထိတ်လန့်တတ်တဲ့လူတွေအတွက်စနေသားသမီးဟာဒုတိယဘုန်းကံအကြီးဆုံးစနေသားဦးမွေးလို့ ဓါးထမ်းကျော်တဲ့မိဘတွေ စောစောသေကုန်ကြလေရဲ့ စနေနေ့မရှိခဲ့ရင်ရတနာ၃ပါးလည်းလောကမှာမရှိနိုင်တော့ဘူးစနေနေ့ကို အကြောင်းပြုပြီးရတနာ ၃ ပါးစုံတဲ့ရတနာအခါတော်နေ့ပဲစနေနေ့ဟာတနည်းအားဖြင့်ဓမ္မစက်စတည်တဲ့နေစနေနေဟာ သိပ်မွန်မြတ်တဲ့နေ့ဘုရားရတနာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့စပေါ်သည်တရားရတနာနဲ့သံဃာရတနာကတော့စနေနေ့မှာစပေါ်တာ ဘုရားမွေးနေ့ သောကြာနေ့က အမြတ်ဆုံး ၆၄၇ရတာနာ၃ပါးက ၄၇၇ ဘုရားက ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တရားနဲ့သံဃာက စနေနေ့စပေါ်ရပါတယ် ရတနာသုံးပါးပေါ်တဲ့နေ့တွေဟာ ၄၇၇ ရတနာ ရတနာကိုကောက်လည်း ၄၇၇ပဲနော်စနေနေ့မရှိပဲတရားလည်းမရှိ နိုင် သံဃာရတနာလည်းမရှိနိုင် တရားနဲ့သံဃာမှ မရှိရင် ဘုရားပွင့်ခဲ့ကြောင်းလည်းမသိနိုင် ရတနာ၃ပါး နဲ့သာသနာကြီး ဆုံတွေ့ခွင့်ရတာဒါကိုသားဦးစနေမီးလိုမွှေဆိုပြီး ပေါက်ကရပြောသူက ရှိခဲ့တယ်…. ရဟန်းတော်တွေအားလုံးဟာဘုရားရဲ့ ဘာတွေလဲ သားတော်တွေ မဟုတ်ဘူးလား သားတွေထဲက ဦးဆုံးသားကို ဘာလို့ခေါ် သားဦး လို့ခေါ်တယ်နော်ပထမဦးဆုံး စနေနေ့မှာ ဓမ္မစကြာတရားဦးဟောတော့ အရှင်ကောဏ္ဍည သောတာပန်တည်တယ် ဘုရားထံမှာ ရဟန်းပြုခွင့်တောင်းတယ် သံဃာရတနာ အစဟာ ဗေဒင်ဆရာကပဲ ကောဏ္ဍည က ဗေဒင်ဆရာဘဝကလာတာလေ ရဟန်းတွေမှာ … Read more
အတူနေ အခန်းဖော်ပြောပြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် နေ့စဉ် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်များ
အတူနေ အခန်းဖော်ပြောပြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် နေ့စဉ် လုပ်နေတဲ့ အလုပ်များ ထောင်ထဲက အတူနေ အခန်းဖော်ပြောပြတဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင် အကြောင်း မအူဝဲလောက်အေးချမ်းတဲ့မင်းသမီး မတွေ့ဖူးဘူးတဲ့ အမနဲ့ပက်သက်ပီးစာလေးနဲနဲလေးရေးချင်လာတာရယ်ဘဝတကွေ့မှာ ကြုံခဲ့ဖူးတဲ့ ဘဝမှာ အမလောက်အေးချမ်းတဲ့မင်းသမီးမျိုးတကယ့်ကို မမြင်ခဲ့ဖူးဘူး ရူပါအထဲရောက်ပီး ၂ ပတ်လောက်နေတော့ အမတို့ရောက်လာခဲ့တယ်။ တစ်ခန်းထဲတူတူနေခဲ့ရပြီး အနေနီးကပ်ခဲ့တဲ့ချိန် အမစိတ်လေးတွေအများကြီးသိခဲ့ရတယ်။ ရူပါတို့ အားလုံးအိပ်နေချိန် မနက်လေးနာရီဆို အမကနိုးပြီးလို့ ရှိသမျှ ပဌာန်း မဟာသမယသုတ် ပရိတ်ကြီး (၁၁) သုတ် အကုန်ရှီခိုးပီးသွားပြီ။ တစ်နေ့လုံးပုတီးလေးစိတ်ပီး ဘယ်အရာပေါ်မှ သူမကောင်းမြင်ခြင်း၊ ငြီးငြူခြင်း၊ တစိုးတစိမှမရှိ။ သူရောက်နေတဲ့နေရာမှာ သူအဆင်မပြေလဲဘယ်သူ့ကိုမှ ငြီးငြူနေတာ၊ ငြိုငြင်နေတာ မျိုးမရှိခဲ့ဘူး။ဘယ်သူ့အကြောင်းကိုမှလဲ သူ့နှုတ်ကနေ ထွက်လေ့ မရှိ။ သူမသိတာဆိုလဲ အူဝဲမသိဖူးဆိုတာလေးနဲ့ ဘယ်လိုတောင်ဖြူစင်မှန်းမသိသော ကလေးတယောက်လို။ သားသမီးနဲ့ပက်သက် လာရင်တော့ … Read more
လူညံ့ လူဖျင်းတွေ ပြောလေ့ရှိတဲ့အချက်(၁၅)ချက် ( 1 ) ဘွဲ့ရအောင် မနေခဲ့ရလို့ (2) အလုပ်က အရမ်း ပင်ပန်းတယ် (3) အချိန်ပြည့် ကျွန်လို လုပ်နေရတာ (4) လုပ်ရတာနဲ့ ရတဲ့လစာက မတန်ဘူး (5) မိဘကတောင် ငါ့ကို မငေါက်ဘူး (6) ချမ်းသာတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာလူမဖြစ်ရတာ နာတယ် (7) ငါက အရမ်းဆင်းရဲတာ ဒါတွေဝယ်နိင်မှာမဟုတ်ဘူး ( 8 ) ထီပေါက်သလို နေ့ခြင်း ညခြင်း ချမ်းသာရင်ကောင်းမယ် (9) ဘယ်တတ်နိင်မှာလဲ ငါက … Read more
စကျဘီးကလေးတဈစီးနဲ့ ဓာတျဆီရောငျးနတေဲ့ ဘဘကို ဘာကွောငျ့ ငိုနတောလဲမေးကွညျ့မိလိုကျသောအခါ…
စက်ဘီးကလေးတစ်စီးနဲ့ ဓာတ်ဆီရောင်းနေတဲ့ ဘဘကို ဘာကြောင့် ငိုနေတာလဲမေးကြည့်မိလိုက်သောအခါ… မုံရွာမြို့ရဲ့ အထင်ကရဆီဆိုင်ကြီးအနီးရှေ့မှာ စက်ဘီးလေးတစ်စီးနဲ့ ဓာတ်ဆီရောင်းနေတဲ့အဘိုးအိုဟာ အသက် ရဝ ကျော်နေပြီဆိုတဲ့အသိတခုနဲ့တင် ကိုယ့်အဘိုးသာဒီလိုပင်ပန်းစွာ ဘဝရဲ့နောက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာ ကျော်ဖြတ်ခဲ့ရသူဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် စိတ်မကောင်းဝမ်းနည်းပြီးငိုမိတယ်။သမီးလေးတစ်ယောက်ရှိပေမဲ့ သမီးလေးဦးနှောက်လေးက စိတ်သိပ်ပုံမှန်မဟုက်တော့ အလုပ်လုပ်စားလို့မရတော့ အဲ့အဘကပဲဓာတ်ဆီလေးရောင်းရင်းနဲ့ ဘဝကိုရပ်တည်နေတယ်။ တခြားလက်မှုလုပ်ငန်းလဲမတတ်မြောက် လူငယ်လူရွယ်တွေလိုလဲ အလုပ်ကြမ်းလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အရွယ်မဟုတ်တဲ့အဘဟာ ကျနော်နဲ့အမြဲကြုံတိုင်းအဲ့အဘဆီမှာ ပဲထည့်ဖြစ်တာ နှစ်အတော်ကြာပြီ ဟိုးနှစ်တွေကတော့ အဲ့အနီးမှာ Donko ဆီဆိုင်ကြီးမရှိတော့ အဲ့အဘရောင်းကောင်းလောက်ပါတယ်။ခုတော့အဲ့နားတစ်ဝိုက် မလှမ်းမကမ်းလေးမှာ ဆီဆိုင်ကြီးရှိတော့ လူတွေကသိပ်မထည့်ကြတော့ဘူး ဆီဆိုင်ကြီးတွေကပိုရတယ်ဆိုပြီး ဆိုင်ကြီးတွေမှာထည့်ကြတာပဲများတယ် ပြောချင်မိတာကဆိုင်ကြီးတွေဆီမှာထည့်လို့ပိုရလှမှ အများဆုံးသုံးရာဖိုးလောက်ပေါ့ ဆီပိုရတာကိုပဲမကြည့်ပဲ.. ဒီအဘဆီမှာပဲထည့်ကြမယ်ဆိုရင် စားဝတ်နေရေးအတွက် တစ်ဖက်တလမ်းကနေ ကူညီရာရောက်ပါတယ် ငွေဖြင့်သက်သက်မကူညီနိုင်ပေမဲ့ ကျုပ်ကတော့ကြုံတိုင်းအဲ့အဘဆီမှာပဲထည့်တယ် အားပေးတဲ့သဘောမျိုးပါ ဆီဆိုင်ကြီးတွေထည့်ရင် ဆီပိုရမှန်းသိပေမဲ့ တက်နိုင်တဲ့ဘက်က ကူညီပေးရာရောက်လို့ပါ တစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး လူဆယ်ဦးထည့်အုံးအဘတွက်စားဝတ်နေရေးအဆင်ပြေလောက်မှာပါ မုံရွာမြို့မှာဒီလောက်ဆိုင်ကယ်တွေပေါးပြီးထွတ်နေကြပေမဲ့ အဲ့အဘဆိုင်လေးကြည့်မိတိုင်း … Read more
နတ်တွေကိုကန်တော့လျှင် သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲလား (ဗဟုသုတအနေနဲ့ သိထားသင့်ပါတယ်)
နတ်တွေကိုကန်တော့လျှင် သရဏဂုံပျက်တယ်ဆိုတာ သိပါသလား နတ်တွေကိုကန်တော့လျှင် သရဏဂုံပျက်ပါတယ် ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်တဲ့ ဥပါသကာမှန်ရင် ရတနာသုံးပါး ပြင်ပ အရာတွေကို အလေးအမြတ် မပြုအပ်ဘူး။ရတနာသုံးပါးရဲ့အပြင်ပမှာ ရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို –နံပါတ် ၁ – မိမိကိုယ်ကို အပ်နှင်းလှူဒါန်းခဲ့လျှင်၊နံပါတ် ၂ – ကိုးကွယ်လဲလျောင်း ပုန်းအောင်းမှီခိုရာအဖြစ်နဲ့ ဆည်းကပ်ခဲ့လျှင်၊ နံပါတ် ၃ – ကိုးကွယ်အားထားရာအဖြစ် ဆရာအဖြစ်နဲ့ရည်ညွှန်းပြီး မိမိကိုယ်ကို တပည့်အဖြစ်နဲ့ ခံယူဆောက်တည်ခဲ့လျှင်၊ နံပါတ် ၄ – အလွန်အမင်း ရိုသေစွာ ရှိခိုးခဲ့လျှင် – မူလဆောက်တည်ထားတဲ့ သရဏဂုံသည် အလိုလို ပျက်တယ်။ ဒီလို ပျက်စီးနည်းသည် သာဝဇ္ဇ – အပြစ်ရှိတဲ့ သရဏဂုံပျက်စီးနည်း ဖြစ်တယ်။အပြစ်ရှိတဲ့ ပျက်စီးနည်းဆိုတာ“သော စ အနိဋ္ဌဖလော ဟောတိ”နောင်တစ်ချိန်မှာ … Read more
ပုရှကျဆိတျ အမဲအကောငျ၁ဝဝနဲ့ အနီ အကောငျ၁ဝဝကို ဖနျပုလငျး တဈခုထဲကို ထညျ့လှုပျလိုကျတဲ့အခါ
အဘိုးကြီးက လင်မယားနှစ်ယောက်ကို လစာ ၅သိန်းပေးပြီး နေစရာလည်းပေးတယ် ဆန်တစ်အိတ်၊ဆီ၁ပုံးနဲ့ဘောက်ဆူးအဖြစ်​ပိုက်ဆံ၁၅သိန်းပါပေးလိုက်တဲ့အခါ
လင်မယားနှစ်ယောက်ကို လစာ ၅သိန်းပေးပြီး နေစရာလည်းပေးတယ်… ဆန်တစ်အိတ်​ဆီ၁ပုံးနဲ့ဘောက်ဆူးအဖြစ်​ပိုက်ဆံ၁၅သိန်းပေးလိုက်သောအခါ လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲဟာ အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ကြပါတယ် အဖိုးအိုက အဲ့လင်မယားကို တစ်ယောက်၂သိန်းခွဲဆီ လစာပေးထားပြီး၂ယောက်ပေါင်း ၅သိန်းမှန်မှန်ပေးပါတယ်…။ နေစရာလည်းပေးတယ်​ဆန်တစ်အိတ်​ဆီ၁ပုံးနဲ့ ငါးခြောက်တွေဘာတွေပါ​ထောက်ပံ့ပေးပြီး စရိတ်ငြိမ်းထားပေးတာပါ…။ သူတို့လင်​မယားနှစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်က တစ်ရက်ကို၂ခါ မနက်တစ်ခေါက်​ညနေတစ်ခေါက်​ အဘိုးကြီးရဲ့ငါးကန်ထဲက ငါးတွေကို ငါးစာကျွေးပေးယုံပါပဲ။ အဲ့အလုပ်ပြီးတာနဲ့ သူတို့လင်မယား စုံတွဲလုပ်ချင်ရာလုပ်လို့ရပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ သူတို့​နေတဲ့ခြံပေါင်းတွေမြက်တွေထူလာရင်နဲနဲပါးပါး ရှင်းယုံကလွဲလို့​ပေါ့။ အဖိုးကြီးက သူ့အလုပ်သမားတွေကိုဘာလုပ်ရမယ်​ဘယ်လိုနေရမယ်လို့ မသတ်မှတ်ထားပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင်လည်းတစ်လနေမှ၂ခေါက်​၃ ခေါက်လောက်ပဲခြံထဲကိုလာတတ်တာပါ။ အဲ့တာကလည်း ငါးစာလာပို့ တဲ့အခါရိက္ခာနဲ့လစာ လာထုတ်​​ပေးတဲ့အခါတွေမှသာ​ရောက်လာတတ်တာပါ။ ဒီလိုနဲ့၂ နှစ်ကျော်ကြာလာတော့ အဖိုးကြီးဟာ ငါးကန်ထဲကငါးတွေထုတ်ရောင်းပါတယ်။ အဖိုးအိုဟာ ငါးတွေရောင်းလို့ရတာအမြတ်​သိန်း ၃၀၀လောက်ရလိုက်​ပါတယ်။ သူဟာ သူ့အလုပ်သမားလင်မယား၂ယောက်ကို ​ဘောက်ဆူးအဖြစ်​ပိုက်ဆံ ၁၅သိန်းပေးပါတယ်…။ ပြီးတော့ သူတို့လင်မယားကို မွေးရပ်မြေ နဲ့ဆွေမျိုးတွေဆီ အလည်သွားလို့ရအောင်​နားရက်ခွင့်ရက်ရှည် ၁လ … Read more
အဖတေိုငျးရဲ့ ရငျထဲမှာ ရှိနပေမေယျ့ သားသမီးတှကေို ပွောမထှကျတဲ့ စကားမြား
အဖေတွေရဲ့ ရင်ထဲမှာ ရှိနေပေမယ့် သားသမီး တွေကိုပြောမထွက်တဲ့ စကားများ ဘယ်သားသမီးကိုမှ မပြောချင်ခဲ့တဲ့ ဖခင်တို့ရဲ့ ရင်တွင်းစကားများ သားသမီးဆိုတာ ရေချိုးပေးတဲ့ အမေ့ကိုသာချစ်တတ်ကြတာ။ စဥ့်အိုးထဲကို ရေအပြည့် ထမ်းထည့်ပေးထားတဲ့ ကျုပ်တို့ဖခင်တွေကိုတော့ ချစ်ရကောင်းမှန်းမသိကြဘူး ။ သူတို့အမေကလည်း သင်မပေးဘူး ။သားသမီးတွေရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ထမင်းတွေခွံကျွေးတဲ့ အမေ ၊ထမင်းပန်းကန်ထဲကို ထမင်းခူးပေးတဲ့အမေ ၊ မီးဖိုချောင်ထဲက တကုပ်ကုပ်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတဲ့အမေ ။ သူတို့အမေကိုတော့ သူတို့ကချစ်လိုက်ကြတာ။ ချစ်ကြမှာပေါ့..သူတို့အမေအလုပ်လုပ်နေတာကို မြင်တွေ့နေရတာကိုးး။ အဲ့ဒိထမင်းတွေဖြစ်လာဖို့ ကျုပ်တို့ ဘယ်လောက်အထိ သူတို့ကွယ်ရာမှာ အလုပ်လုပ်နေရတယ်ဆိုတာ သူတို့မတွေးမိဘူး.. သားသမီးဆိုတာ သူတို့အမေရဲ့ နို့ဖိုးကိုသာ မြင်လွယ်ကြတာပါဗျာ ။ ကျုပ်တို့လို ဖခင်တွေရဲ့ ချွေးဖိုးကိုတော့ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်း မသိကြပါဘူး ။ တသက်လုံးစို့နေတဲ့ ချွေးကို … Read more
လပြည့်ည နဲ့ ကရဝေးရွက် ပက်ပက်စက်စက် စီးပွားတက်
စတငျလုပျဆောငျရငျဖယောငျးတိုငျအဖွူတဈတိုငျထှနျးထားပါ။ကရဝေးရှကျတဈရှကျကိုရမှေေးဖွနျးပါ။ ကရဝေးအစိုအခွောကျ ဘယျဟာဖွဈဖွဈရပါတယျ။ အနာအဆာ အပေါကျ အကြိုး မဖွဈစရေပါ။ အဲဒီကရဝေးရှကျပျေါမှာ မတျကာပငျအနီနဲ့ မိမိနာမညျ မှေးနရေ့ေးပါ။မတျကာပငျ Marker Pen အနီပဲရပါမယျ။ ဆော့ပငျ ဘောပငျအနီမရပါ ကရဝေးရှကျ ရဲ့အခွားတဈဖကျမှာ မိမိလိုအပျတါလိုတိုရှငျးရေးပါ။ဥပမါ ငှမြေားစှာဝငျပါစေ စသညျ ။ အင်ျဂလိပျလိုရေးလညျးရပါတယျ။ ဒါမှမဟုတျ အကွှေးသိနျးတဈရာပွနျရပါစေ စသညျရေးနိုငျပါတယျ။ ဈေးရောငျးကောငျးပါစေ လညျးရေးနိုငျပါတယျ။စီးပှားရေး ငှကွေေးနဲပတျသကျပွီး မိမိ လိုအပျနတေဲ့ဆီလြျောသငျ့မွတျရာရေးနိုငျပါတယျ ပွီးရငျ ငှစေက်ကူ ၅၀၀၀တနျ ၁၀၀၀၀ တနျ ၁၀၀၀ တနျ၅၀၀ တနျ စသညျရရာတဈရှကျရှကျ နဲ့ပတျလိုကျပါ။ ငှစေက်ကူကွားထဲရောကျရငျရပါပွီ။ပွီးရငျ အဲဒါကို လကျနဲ့ကိုငျထားပွီး ဒိဝါတပတိဂါထာသကျစေ့ ပူဇျောပါ။ပွီးရငျ အဲဒီငှစေက်ကူနဲ့ ကရဝေးရှကျ အခေါကျကိုဖယောငျးတိုငျ မီးနဲ့ နညျးနညျးခှာပွီး မီးအပူပေးပါ။လိုရာဆုတောငျးပါ။ ပွီးရငျ အဲဒီအခေါကျအတိုငျးခေါငျးအုံးအောကျထားအိပျပါ။စက်ကူအိတျနဲ့ ထညျ့နိုငျပါတယျ။ခေါငျးအုံးက … Read more